यस्ता छन् मानव स्वास्थ्यको लागि काफल खानुका फाइदाहरु Nepalpatra यस्ता छन् मानव स्वास्थ्यको लागि काफल खानुका फाइदाहरु
काफल नचाख्ने सायद को होला ? आउनुस् आज काफलको बारेमा जानौं । यो फल एउटा लोकप्रिय पहाडी फल हो । यो गर्मी मौसममा पहाडका वन पाखाहरूमा पाकेको हुन्छ । यसको स्वाद अमिलो मिठो हुन्छ । यसको फलको रंग काँचोमा हरियो हुन्छ । पाकी सकेपछी रातो र धेरै पाकेपछि बैजनी रंगको हुन्छ ।
काफललाई हामीले फलको रुपमा मात्र प्रयोग नगरेर यसलाई औषधीको रूपमा समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ । काफलमा प्रोटिन १.३० प्रतीशत फाइवर ३.४० प्रतिशत, वसा ०.०२ प्रतिशत, जैविक पदार्थ ९८.१० प्रतिशत, कार्बोहाईड्रेट १६.१३ प्रतिशत, कैल्शियम १.० मि.ग्रा. प्रति १०० ग्राम, मैग्नीशियम ८.४ मिग्रा ० प्रति १०० ग्राम, पोटेशियम १.९८ मिग्रा ० प्रति १०० ग्राम पाइन्छ ।
काफलको नियमित सेवन गर्दा धेरै प्रकारको फाइदा हामीले काफल बाट प्राप्त गर्न सक्छौं । आजको लेखमा काफलबाट के कस्ता रोगमा प्रयोग गरेर फाइदा उठाउन सकिन्छ भन्नेबारे पाठकलाई जानकारी पस्कन गइरहेका छौं फाइदा उठाउन सक्नु हुनेछ ।
३. कैसर, कालो तिल र पुरानो गुड (शक्कर) र काफलको बोक्रा मिलाई काडा पकाएर पिलाए मासिकधर्म सम्बन्धी कष्ट आराम हुन्छ । यो औषधी खानासाथ अन्य खानेकुरा दिनुपर्छ ।
तिहारको चिल्लो र गुलियोबाट स्वास्थ्यलाई जोगाऔँ
जाडोमा के कस्ता खानेकुराहरु खाने ?
यस्ता छन् स्वास्थ्यका लागि काजु खानुका फाइदाहरु